Atomization နည်းပညာဖြင့် လက်နက်ကိုင် ပြီး ခေါင်းဆောင် Smoore ကို အငွေ့ ပြန်စေ သည် - Pandaily
Atomization နည်းပညာဖြင့် လက်နက်ကိုင် ပြီး ခေါင်းဆောင် Smoore ကို အငွေ့ ပြန်စေ သည်
Nov 29, 2021, 18:10ညနေ 2021/11/30 12:23:54 Peter Catterall
2019 ခုနှစ်အကုန်တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့က ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆေးရွက်ကြီး ထွက်ကုန် များကိုအသုံးပြု သော အမျိုးသား အရေအတွက်သည် ပထမဆုံးအကြိမ် & nbsp ဖြစ်သည်ဟု အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ခန့်မှန်း ကျဆင်း။ ဤ တွေ့ရှိချက် များက ၂၀ ရာစု အများစု အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက် မှုနှုန်းကို တွေ့ကြုံ ပြီးနောက် စက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုလုံး သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း သိသိသာသာ ပြောင်းလဲ သွားကြောင်း မီးမောင်းထိုး ပြသည်။
စားသုံးသူ အလေ့အထ များ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဆေးလိပ်သောက် ခြင်း ၏အန္တရာယ် ရှိသော ကျန်းမာရေး ကို လူများ ပိုမိုသိရှိ လာခြင်း နှင့်အတူ စက်မှုလုပ်ငန်း သစ် တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာ သည်။ အငွေ့ ပျံ ခြင်းနှင့် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် များသည် သာမန် မီးလောင် လွယ် သော ဆေးရွက်ကြီး ထုတ်ကုန် များအတွက် အန္တရာယ် နည်းသော အခြား နည်းလမ်းများ ကိုပေးသည်။ စျေးကွက် တွင်ပါ ၀ င်သူများ-အဟောင်း နှင့် အသစ်-သည် အခွင့်အရေး ကိုအသုံးချ ကြသည်။
စက်မှု လုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အငွေ့ ပျံ စေသော ပစ္စည်းကိရိယာ များ၏အခြေခံ အဖြစ် အက်တမ် နည်းပညာ ကိုအခြား ကဏ္ sectors များစွာ တွင်လည်း အသုံးချ နိုင်ပြီး ထို ကုမ္ပဏီများ ၏အနာဂတ် လမ်းကြောင်း အပေါ်များစွာ အကျိုးသက်ရောက် နိုင်သည်။
& nbsp အရ;Nexettအက်တမ် ဓာတ်ပြု ခြင်းသည် “အရည် စီးဆင်းမှုကို သေးငယ်သော အစက် ငယ် များ (သို့) အမှုန် များအဖြစ် သို့ ထိန်းချုပ်ထား” ခြင်း မျှ သာဖြစ်သည်။ အငွေ့ ပျံ စေသော စက်မှုလုပ်ငန်း အပြင် အမေရိကန် တစ်နိုင်ငံ တည်း ၌ ကုမ္ပဏီ ၂၁၀ ၀၀ ကျော် သည်ဤ နည်းပညာကိုအသုံးပြု ကြသည်။
“Atomization နည်းပညာကို အငွေ့ ပျံ စေ ရုံသာမက အလှအပ ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှု၊ ဆေးဝါး နဲ့ အခြား နယ်ပယ် တွေမှာလည်း အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်” လို့ ရှန်ကျန်း အခြေစိုက် အငွေ့ ပျံ မှု နည်းပညာ ခေါင်းဆောင် စမ ိုး လ် ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဖရန့် ကီ ချန် က ပန် ဒေး လီ ကို မှတ်ချက် ပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် နွေ ရာသီက ဟောင်ကောင်ရှိ IPO ကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့် ခဲ့ပြီးနောက် Smoore သည်ကမ္ဘာ့ အငွေ့ ပျံ မှု လုပ်ငန်းတွင် တန်ဖိုး အရှိဆုံး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာပြီး လက်ရှိ စျေးကွက် တန်ဖိုး မှာဒေါ်လာ ၃၈ ဘီလီယံ ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ၏ ၁၈. ၉% ရှိသည့် အငွေ့ ပျံ စေသော ပစ္စည်းကိရိယာ များနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကို အထူးပြု သည်။
” တ႐ုတ္ မွာ အလံုး လိုက္ အလွ ကုန္ ပစၥည္းေတြ လို လူသံုး ကုန္ပစၥည္း ေတြအတြက္ အင္မတန္ ဆန္းသစ္ တဲ့ ေစ်းကြက္ တစ္ခု ရွိပါတယ္ ” ဟု ထရန္႔က ေျပာသည္။ သူက ဆက်ပြော သည်မှာ Smoore သည် အထူးသဖြင့် တရုတ် အမျိုးသမီး စားသုံးသူ မျိုးဆက်သစ် များအကြား ၎င်း ၏သြဇာ ကိုတိုးချဲ့ ရန် အထောက်အကူပြု မည့် ဤ နယ်ပယ်တွင် နည်းပညာ ကိုမည်သို့ အသုံးပြု ရမည် ကိုလေ့လာ နေသည်။
ေနာက္တခုက စိတ္၀င္စား တာက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈ ေပါ့။ ဇွန်လတွင် Smoore သည် ဖလော်ရီဒါ ဇီဝ ဆေးဝါး ကုမ္ပဏီ AIM Immunotechnologies နှင့် ပူးပေါင်း၍ COVID-19 နှင့်အခြား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါများ ကိုကုသ ရန်အသုံးပြု နိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင် ရှူရှိုက်မိ သည့်ကိရိယာ ကိုပူးတွဲ တီထွင်ခဲ့သည်။
Frank Han, Smoor ၏အကြီး တန်း ဒု ဥက္က president ္ဌ နှင့် FEELM ၏ဥက္က president ္ဌ, atomizing နည်းပညာ အမှတ်တံဆိပ် & nbsp အပေါ် အာရုံစူးစိုက်;စက္တင္ဘာ လက-“မ ဝေး တော့ သော အနာဂတ်တွင် ဆေး သို့မဟုတ် ကာကွယ်ဆေး ကို ရှူရှိုက်မိ သူ အရေအတွက် တိုးများ လာသည်။ ယင်းသည် ကမ္ဘာ ကြီးကို ကပ် ရောဂါ မှ လွတ်မြောက် ရန် ပင် ကူညီ ပေးနိုင်သည်။”
Smoore နှင့်အခြား vaping ကုမ္ပဏီ များအနေဖြင့် ဤ နယ်ပယ် သို့ ၀ င်ရောက် ရန်ပြင်ဆင် နေချိန်တွင် အောင်မြင် မှုအတွက် သော့ ချက်မှာ ရှူရှိုက်မိ သည့် ပစ္စည်း ကိရိယာများကို မူးယစ်ဆေးဝါး ကိုယ်တိုင် နှင့်ပေါင်းစပ် ရန်ဖြစ်သည်။ Chen ၏အဆိုအရ “လာမည့် nebulized ကျန်းမာရေး ထုတ်ကုန် များအတွက် (Smoore) သည် ရှူရှိုက်မိ ခြင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ပေါင်းစပ် ခြင်းနည်းပညာ ကိုတီထွင် လိမ့်မည်”
လုပ်ငန်း နယ်ပယ် ရှိ ကုမ္ပဏီ များအတွက် အမျိုးမျိုးသော ထုတ်ကုန် လိုင်း များ သည်ကောင်းမွန်သော အကြံ တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ မတ်လ တွင်တရုတ် အစိုးရနှင့် nbsp ၊မိတ်ဆက် အီလက်ထရောနစ် စီးက ရက်နှင့် အငွေ့ ပျံ စေသော ပစ္စည်း ကိရိယာများကို ရိုးရာ ဆေးရွက်ကြီး လောင်ကျွမ်း သော ထုတ်ကုန်များ နှင့်ပိုမို ကိုက်ညီ စေ ရန်ရည်ရွယ် သည့် ဥပဒေမူကြမ်း များစွာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သတင်း ထွက်ပေါ်လာ ပြီးနောက် ပေကျင်း အခြေစိုက် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် ကုမ္ပဏီ RELX Technology ၏ရှယ်ယာ များသည် & nbsp အထိ ကျဆင်းခဲ့သည်။၄၇. ၈%Smoore သည် ၃၅% ကျော် ကျဆင်းခဲ့သည်။
႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎို ဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ေနႛက တ႟ုတ္ျပင္ဆင္ ခ်က္နိုင်ငံ၏ ဆေးရွက်ကြီး လက်ဝါးကြီးအုပ် မှု ဥပဒေတွင် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် များပါ ၀ င်ပြီး ချက်ချင်း အကျိုးသက်ရောက် လိမ့်မည်။ တရုတ်နှင့် ကမ္ဘာတ ဝှမ်း ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်း များပိုမို တင်းကျပ် လာသည်နှင့်အမျှ ဆန်းသစ်တီထွင် ရန်နှင့် ချဲ့ထွင် ရန်ပျက်ကွက် သော ကုမ္ပဏီများသည် ပြ trouble နာ များ ကြုံတွေ့ ရနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Vape နိုင်ငံများ-ဒီဂျစ်တယ် ကမ္ဘာ တွင် အကြီးဆုံး ဆေးရွက်ကြီး ဈေးကွက်
မည်သို့ပင်ဆို စေကာမူ အဓိက စျေးကွက် ကစား သမားများ ကဤ ဆုံးဖြတ် ချက်များသည် မူဝါဒ ပတ်ဝန်းကျင် ကြောင့် မဟုတ်ကြောင်း အခိုင်အမာ ဆိုကြသည်။ ထရန္႔က ဆက္လက္၍ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဖိအား ေတြေၾကာင့္ ပဲ မတူကြဲျပား မႈေတြကို လုပ္ေန တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္တဲ့ atomization, better life” ဟု ေျပာခဲ့သည္။
စားသုံးသူ အလေ့အထ များ ပြောင်းလဲခြင်း၊ နည်းပညာ တိုးတက် မှုများနှင့် စည်းမျဉ်း မူဘောင် များ ကျဉ်းမြောင်း ခြင်း တို့သည် ရေရှည် ဆေးရွက်ကြီး ကုမ္ပဏီကြီး များအား အတိတ် ကာ လမှ လုံးဝ ကွဲပြားခြားနားသော ရပ်တည်ချက် ကိုယူ ရန် ဖိအား ပေးခဲ့သည်။ British American Tobacco (BAT)-ယခု ဆောင်ပုဒ် မှာ “Better Tomorrow”- တောင်းဆို မှုများ စားသုံး သူများ သည်အခြား ဆေးလိပ်သောက် သည့် ထုတ်ကုန် များကိုပိုမို မျှော်လင့် နေကြ သည်ဟုဆိုသည်။ ယခင်က စီးကရက် နှင့်ဆက်စပ် ခဲ့ သကဲ့သို့ (British American Tobacco) ကဤ တိုးတက် မှုသည် စီးကရက် သုံးစွဲမှု ကျဆင်း ခြင်းကို ထေမိ စေ လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။
E-cigarette ၏အနာဂတ် အတွက် ဤ ရဲရင့် သော လောင်းကြေး သည် အကျိုးဖြစ်ထွန်း မည် လား ဆိုသည် ကိုဆုံးဖြတ်ရန် စော လွန်း သေး သော်လည်း atomization နည်းပညာ နှင့်၎င်း၏ ကျယ်ပြန့်သော အလားအလာရှိသော အသုံးချ မှုများသည် ဆက်လက် တည်ရှိနေ ပုံရသည်။
Vaping ခေါင်းဆောင် Smoore က နည်းပညာ သစ် တွေကို Global Launch မှာ ပြသ
Shenzhen အေျခစိုက္ ကမာၻ႔ ထိပ္တန္း အ ေငြ႕ ေငြ႕ ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္တဲ့ Smoore ကုမၸဏီဟာ အီလက္ထ ရြန္ နစ္ စီးက ရက္ နည္းပညာ နယ္ပယ္ မွာ လတ္တေလာ တိုးတက္ မႈေတြကို ထုတ္လႊင့္ ျပသ တဲ့ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို အဂၤါေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။